Indlela yokufumana i-PR9 yenza i-backlinks ngexesha elifutshane?
Ukwenza ibhizinisi lakho libonakale kwi-Google, kufuneka ubeke isithuba kwi-1st okanye ubuncinci kwiphepha le-2 lekhasi lokukhangela. Kunzima ukutshintsha indawo yakho ukuya kwi-TOP ye-Google SERP njengoko ukhuphiswano kuwo onke amanqaku eemarike liphezulu. Iinkalo ezimbini ezibalulekileyo ezinokukwenza uphumelele ishishini lakho kwi-intanethi ukuphuculwa kweenjini zokukhangela kunye nokukhangisa kweemeko. Nangona ukuhlawulwa kweentengiso kwiintengiso zibonakala zibiza kakhulu kumashishini athile, ukuphuculwa kweenjini zokukhangela kunokwenziwa ngeendleko ezincinci. Nangona kunjalo, kukufanelekile ukukhankanya ukuba kufuneka ukwazi zonke iinkalo zokucwangcisa kunye neengcamango kunye neengcingo kunye neendlela zokudala ukuphucula ukuphucula. Ngenhlanhla, kukho ezininzi ze-blogs ze-SEO ezifana nale, ngokukodwa eyenzelwe ukwenza ukuba ubukho bakho bentlalo buqine.
Eli nqaku linikezelwe kumxholo wokwakha i-PR9 ukulandela i-backlinks. Uya kufunda ukuba i-backlink exabisekileyo kwishishini lakho kwaye yiyiphi imithombo yewebhu enegunya kunye neeplani zezentlalo ongazisebenzisayo ukwakha iinqununu ezifanelekileyo kunye nekhwalithi ezingenayo kwiziko lakho.
Kutheni kufuneka ube nokwakha i-backlinks kwimithombo yewebhu ye-PR9?
Ukunxibelelana kweeNtlalo ezithandwayo ezifana ne-Facebook, Twitter kunye ne-LinkedIn banomgangatho ophezulu we-PageRank ophezulu kwi-SEO. Ezi ziqonga ziindawo ezintle apho kufuneka kuthethwe khona indawo yakho. Ukudala i-backlink kwiblogi yakho ukusuka kwimithombo yewebhu ye-PR9 kuya kuba nefuthe ngokuqinisekileyo kwindawo yakho yokubeka indawo kwiGoogle. Yingakho kungumqondo ophezulu ukusebenzisa iinqanaba zawo eziphezulu ngenzuzo yakho ngokubhekisela kwiblogi yakho kubo. Ukuba yonke into eyenziwe ngokuchanekileyo, uya kufumana igunya elingakumbi kwiijini zokukhangela kunye nezinga eliphezulu.
Kukho iintlobo ezimbini ze-backlinks ongayifumana kwiiwebhusayithi eziphezulu ze-PR - zilandele kwaye zilandele. Yenza i-backlinks ixabise ixabiso kwizayithi zakho njengoko idlulisela ijusi yekhonkco. Iinjini zophando ziqaphela izibonakaliso ezivela kwimithombo egunyazisiweyo ngokusebenzisa i-backlink kwaye zinika indawo yakho indawo ephezulu. Uqhagamshelwano kunye ne "tags" ayikwazi ukuphawulwa yibhokisi yokukhangela kwaye ivelise ixabiso lentengo kwiziko lakho lokuphakamisa indawo. Kwi-HTML, yenza ilandelayo ikhowudi engagqibekanga yezonxibelelwano. Kudinga ukungongeza into ekhethekileyo kwiiwebhusayithi ze-URL. Ngokuchaseneyo, akukho myalezo olandelayo olandelayo omele umyalelo othile obonisa ukuba ikhonkco akufanele ibalwe kwindawo.
Indlela yokufumana i-PR9 yenza ntoni i-backlinks?
Indlela elula yokudala i-backlink ephezulu ye-PR kukuba wenze amazwana okanye wenze iphepha leprofayili. Kodwa okokuqala, kufuneka uyenze uphando kwaye ujonge amanani e-intanethi kwimithombo yewebhu ehambelana niche kwaye ucinge ngoluphi uhlobo lwezithuthi abaza kuzisa kwisiza sakho.
Makhe sijonge enye yezona ndawo zithandwa kakhulu kwi-social networks ye-PR eziza kuzisa i-juice ye-link quality kwiziko lakho.
Udinga ukudala iphepha lakho le shishini kwi-Facebook, uze uye "Yongeza isiqulatho se-HTML kwikhasi" uze ushiye iwebhusayithi yakho esemthethweni URL. Emva koko kufuneka ufumane iqhosha elithi "Hlela" kwaye ususe ifayile, isalathisi. html. Kule candelo kufuneka udibanise isiqhagamshelo sakho somthombo wewebhu kule fom elandelayo: Igama lakho leBlog . Ukugqiba inkqubo yokudala i-backfink ye-backlink kwi-Facebook, kufuneka ukhethe kwiqhosha elithi "Gcina nokushicilela" iqhosha.
Ukudala i-backlinks backlinks kwi-LinkedIn ifana ne-Facebook. Udinga ukudala i-akhawunti yakho yebhankini kwaye kwicandelo elithi "Ulwazi lomntu siqu" kufaka i-backlink yakho yangasese. Ezinye izixhumanisi onokuzakhela kule nqonga ziza kulandelwa Source .